I-Visa yaseNdiya engxamisekileyo | Visa engxamisekileyo yaseIndiya | I-Visa engxamisekileyo ukuya eIndiya
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga ne-Visa yaseNdiya engxamisekileyo
I-Visa kaNgxamiseko yeIndiya (Ngxamisekileyo iVisa yaseIndiya) inokusetyenziswa koku https://www.india-visa-online.com ngayo nayiphi na imfuno engxamisekileyo nengxamisekileyo Oku kunokuba kukufa kusapho, ukugula kwesiqu sakho okanye isizalwane esisondeleyo okanye ubukho obufunekayo enkundleni.
Urhulumente waseIndiya Kwenziwe lula ukuba uninzi lwamazwe afake isicelo kwiVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (eVisa India) ngokugcwalisa i-intanethi Ifomu yesicelo seVisa yaseIndiya ngeenjongo zokhenketho, ushishino, ezonyango kunye neenkomfa.
Kuya kufuneka uyazi I-Visa engxamisekileyo yeIndiya (I-Visa engxamisekileyo ye-Indiya) ifuna umntu oza kundwendwela kwi-ofisi yase-India.
Inkqubo ye-Visa engxamisekileyo
Ukuqhubela phambili ukusebenza kweVisa yaseIndiya umrhumo kufuneka uhlawulwe kubakhenkethi, amashishini, ezonyango, iinkomfa kunye neeNdawo zokundwendwela eziNdwendwe zaseIndiya. Eli ziko likuvumela ukuba ufumane iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi (eVisa India) ngamafutshane nje iiyure ezingama-24 kunye namaxesha angama-72 ubuninzi. Oku kufanelekile ukuba unyanzelwe lixesha okanye ubhukishe uhambo lomzuzu wokugqibela ukuya eIndiya kwaye uyayifuna iVisa yaseIndiya kwangoko.
Yintoni iNgxamiseko kwaye yintoni iNgxamiseko
Ingxamiseko kuxa isiganeko esingalindelekanga senzeka njengokulahleka kobomi, ukugula ngesiquphe okanye umcimbi ofuna ubukho bakho kwangoko eIndiya.
Ukungxamiseka kuxa uhamba uKhenketho, uShishino okanye izizathu zoNyango kwaye awunakulinda ulibaziseko olude malunga nokukhutshwa kweVisa yaseIndiya. Iqela lethu liza kusebenza ngeholide, emva kwexesha kunye nangeempelaveki ukuqinisekisa ukuba abo bafuna Ngxamisekileyo iVisa yaseIndiya Bayakwazi ukufumana i-Visa ngexesha elifutshane kakhulu. Oku kungakhawuleza njengeyure ezili-18- 24 okanye kunokuthatha iiyure ezingama-48. Elona xesha liqinisekileyo lixhomekeke kumthamo wamatyala anje nangaliphi na ixesha apha enyakeni kunye nokufumaneka kwabasebenzi base-Visa baseIndiya abalungisa izinto abasendleleni yokuncedisa abahambi abahamba ngaphakathi ukuya eIndiya.
Siyaqonda ukuba kubalulekile ukuba ufumane i-Visa yaseIndiya kwimeko ye-Urgency elona xesha lifutshane kakhulu elinokwenzeka. Senza zonke iinzame zokunciphisa eli xesha libekiweyo. Urhulumente wase-India udale indawo yokuqhubela phambili ukusebenza nge-Visa
I-Visa engxamisekileyo yaseIndiya inokwenziwa kwinkqubo yeqela elikhawulezayo nelisebenza ujikeleze iwotshi.
Ukuqwalaselwa kokusebenza kwe-Visa yaseNdiya engxamisekileyo:
I-Visa yaseNdiya engxamisekileyo inokufuna ukuba unxibelelane nabasebenzi beDesika yoNcedo lweVisa yoNcedo lwaseIndiya.
Ifuna imvume yangaphakathi ngabaphathi bethu.
Ungahlawuliswa imali eyongezelelweyo ukuze ufumane le nkonzo.
Unokucelwa ukuba utyelele kwindlu yozakuzo yaseIndiya xa kunokwenzeka ukuba kusweleke isalamane sakho xa usenza isicelo se-Visa engxamisekileyo.
Kuluxanduva lwakho ukubonelela zonke iinkcukacha ezichanekileyo kwifom yesicelo.
Iintsuku kuphela xa i-Visa ye-Emergency ingasebenzi Iiholide zesizwe zaseIndiya.
Akufuneki ufake isicelo ezininzi ngexesha elinye enye yezicelo zakho zinokwaliwa njengezingafunekiyo.
Ukuba uceba ukufumana iVisa engxamisekileyo kwiNdlu yoZakuzo yaseIndiya, kuya kufuneka ubekhona ngexesha lendawo ngaphambi kwentsimbi yesi-2 kwii-ofisi ezininzi. Umzi wommeli waseIndiya uya kujongana nokusweleka kwesihlobo, ukugula kosapho kunye nezo njongo zazo zonke ezinye izinto zabakhenkethi, ezamashishini, iNkomfa kunye nonyango olungxamisekileyo onokuthi ufake isicelo kulo https://www.india-visa-online.com.
Uya kucelwa ukuba ubonelele ifoto yobuso kwaye Ikopi yokuphinda uvavanye okanye ifowuni esuka kwifowuni emva kokuba intlawulo yenziwe.
Uya kuthunyelwa kwi-Visa yaseNdiya engxamisekileyo emva kokuvunywa nge-imeyile, ungathatha ikopi elithambileyo yePDF okanye ikopi yephepha kwisikhululo senqwelomoya ngokuthe ngqo xa usebenzisa i-Indian Visa Online (eVisa India) yokuPrinta ngokukhawuleza / ukuKhangela okuKhawulezayo kule webhusayithi. https://www.india-visa-online.com.
I-Visa yase-India engxamisekileyo isebenza kuzo zonke I-Visa yaseNdiya egunyazisiweyo yokungena.
Izibonelelo zokukhetha kunye neIndiya iVisa kwi-Intanethi (eVisa India) ye-Indiya ephumelelayo yaseIndiya njengoko ingekhoyo iphepha elipheleleyo, ayifuni ukuba undwendwele I-Ambassia yaseIndiya, evumelekileyo zombini indlela yomoya kunye nolwandle, intlawulo inokwenziwa ngaphezulu kwemali ezi-133 kunye jikeleza ukusetjenziswa kwewashi kwizicelo. Awudingi ukufumana isitampu kwiphepha lakho lokundwendwela okanye undwendwele nayiphi na iofisi kaRhulumente waseIndiya.